Indlela kukhishwe cryptocurrency? Imayini cryptocurrency - ikakhulukazi Amaholo
Inthanethi, Commerce electronic
Kulula ukuqaphela ukuthi computerization siyenzeka kuleli shumi leminyaka elidlule emhlabeni wonke kukho konke. Noma yimuphi mkhakha womsebenzi abantu kungenzeka eduze ahlobene ulwazi nobuchwepheshe. Lapha, abasebenzisi bayakwazi ukugcina ulwazi oluyimfihlo, idatha yomuntu siqu, imibhalo yomsebenzi, ngisho lwemali, ungasebenzisa izinjongo zabo izinsiza lutholakale kalula. Iyakhompyutha Imishini (kusuka amadeskithophu kuseva global) kusiza ukuphatha futhi ukushintsha izinqubo ezihlukahlukene. Emkhakheni wezezimali, lo mkhuba lwangena isikhathi eside. Yingakho abantu abaningi manje esiqotho endleleni ukukhiqiza cryptocurrency.
Ukudalulwa igama elithi "cryptocurrency" Yisho amazwi alula
Ukuze ubone currency kazwelonke ngempela njengoba ruble, dollar, euro, yuan banomlando omude. Lawa evamile imali yomphakathi, okuyinto esekelwa ukusekelwa kwezomnotho we ohulumeni emazweni athile. Cryptocurrency efanayo kuyinto lwemali ezimele digital, okuyinto siku esikhaleni ebonakalayo. It has no ukweseka zangaphandle, ayikho ngaphansi Lwebulungisa yasebhange futhi akuxhomekile orientation zezombusazwe ka esimweni esithile.
It kunezinzuzo zako - cryptocurrency ethandwa hhayi bethembela uhulumeni kanye kwamaZwe. Zivikelekile nge ukubethela ekhethekile, okuyinto cishe aqede kungenzeka ukukhwabanisa, ngenkathi imali yangempela abathengi abavamile Ziningi izinkinga. uhlelo wabo endlalekile futhi ke invulnerable, ngaphezu kwalokho, yonke imisebenzi umsebenzisi awekho ngaphansi iseva ethize olulodwa. Injalo elula kuba iqoqo ikhodi okhiye, okuyinto kufinyeleleke kuwo wonke umuntu futhi ngesikhathi esifanayo engaziwa.
Ingeyokuqala isikhala inthanethi igama elithi "cryptocurrency" kwathoma ngePentekoste lapho ohlelweni lokukhokha "Bitcoin", lapho konke okwenziwayo kanye ukuthenga kwemali has ikhodi yayo siqu esiyingqayizivele. Namuhla kuba cryptocurrency ethandwa kakhulu-dolobha elikhulu. It yasungulwa eminyakeni engu-12 edlule yonjiniyela Japanese Satoshi Nakamoto, noma iqembu labantu nge mbumbulu. Iyunithi ezincane kunazo zonke lwemali ngakhoke kusethelwe ku- "Satoshi".
Kamuva lesi simiso kwakukhona amagatsha ahlukahlukene. Okokuqala, i-software esetshenziswa umthombo ikhodi evulekile lwemali, futhi ngemva 2013 kwakukhona kakade amasayithi ukusekela hhayi kuphela cryptocurrency, kodwa futhi izinkampani ahlobene. Kumasevisi afana zitholakala futhi amasayithi yohwebo Ukuhwebelana, izitolo, izithunywa nokunye.
Ngimhlolile kwakuthiwa ingxenye indlela cryptocurrency, kubalulekile ukufunda ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana futhi ulisebenzise. Abaningi bazibuza ukuthi kwenzeka kanjani, ngokwalokho isikimu konke imisebenzi futhi kungani uyawuthanda ukuthandwa emhlabeni jikelele. Zonke izinqubo ohlelweni yilezi awushintsheki futhi eyingqayizivele. Kususelwa kule cryptocurrency hashi. Uma sikubeka kalula, hashi - lubhalwe ngemfihlo string obude obuthile kanye Inani lezinhlamvu, okuyinto baguqula Imininingwane yasekuqaleni. Shintsha okungenani eyodwa isici - ukushintsha lonke uchungechunge, futhi ikhodi yomthombo asikafiki emuva.
Ukuze uqonde ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana cryptocurrency, odinga ukukwazi mayelana nobuchwepheshe main kule nqubo - blokcheyn. NgesiNgisi, lokhu kusho block chain, okuyinto ugcina idatha ku zonke ukuthengiselana olwenziwa kusukela ekusungulweni lwemali. Ngenxa Hack isimiso esinjalo cishe akunakwenzeka. Lo msuka ikhulisa amabhlogo entsha, okuyinto ukudala abavukuzi Onjiniyela usebenzisa Computing imithombo. Amakhophi etholakalayo umsebenzisi ngamunye kanye Umvukuzi cryptocurrency, intengo kuzokhulisa kuphela.
Njengoba izisebenzi zasezimayini ukukhuthaza lwemali
block ngasinye siqukethe ulwazi mayelana ukuthengiselana ehlukahlukene hashi of block langaphambilini, futhi ngaleyo ndlela ukudala chain. Ukuvela iyunithi entsha kusho ukuthi lowo muntu elithola isizixazululile inkinga futhi wathola umvuzo wakhe. Lokhu kubizwa ngokuthi yi Imayini cryptocurrency. Inqubo kukodwa usesho entsha cryptographic isignesha block ongena phakathi ketanga. Umrholo kuyehla ngokuhamba kwesikhathi, njengoba lwemali iwumthombo elinganiselwe, futhi abavukuzi usuku ngalunye oludlulayo ke kuba more, ngokusobala okuyinto nzima ukuthola zemali abawabheka njengayigugu.
Kukhona amabhlogo legatsha, bona zihilelekile yokusesha abantu, futhi kukhona amasevisi ekhethekile ubavumele ukuba sihlanganise umsebenzi ukuthola isici wesifunda omusha. Lapha, imivuzo izohlukaniswa phakathi kwalabo abenza yezimayini cryptocurrency ngokuthola ingxenye ehlukile ye-hash.
Yikuphi ubuchwepheshe usebenza abasebenzisi
abavukuzi abaningi bekwi ukukhiqizwa semali electronic engale kwemayini ubuchwepheshe. Okuhle ngalokhu ukuthi ukuthi awudingi ukuba sizibuze "indlela aqala ukukhiqiza cryptocurrency ekhaya" bese uzama ukuqonda butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi isidingo lobu buchwepheshe. Asikho isidingo ukulawula indlela osebenzisa ngayo imali kwi ugesi, ukuqapha inqubo kanye isimo imishini, ukumisa isofthiwe. Konke kuzokwenziwa ngenkokhelo okuzisholo ukuba amasevisi athile: HashFlare, GenesisMining, BitMiner nabanye.
Safe noma okuyingozi
I izimayini ifu nezingozi mkhulu kunezinhliziyo kwawena. Okokuqala, usebenzisa iseva elibambayo yomunye, ngoba kukhona ingozi hacker kuhlasela. Okwesibili, inkonzo alithembekile ingafinyelela umkhonyovu. Ububi osobala ukuthi ekupheleni imali kumaphesenti athile uya umlamuli. Inani cryptocurrency kuzuba uma hhayi nsuku zonke, bese masonto onke, amasayithi ezahlukene ukunikela izindleko ezahlukene. Ngakho-ke kubalulekile ukuthola site omethembayo ukuqapha Yiqiniso.
Lokhu lwemali lungekho ngaphansi kwamandla emali, futhi luvikelwe ngaphakathi iseva ngalo Main. amasevisi cryptocurrency zisebenzisa zokuzivikela izindlela POS futhi Pow, lelo okuthi lapho umsebenzi ngokuhlanganyela isakazwa phakathi abavukuzi, kanye amabhlogo uhlamvu lwemali ukwesekwa. Lokhu kunciphisa kakhulu ingozi yokuhlaselwa. Ububi itholakala lokuthi manje, lapho am Main kukhona abadlali medium and enkulu, umsebenzisi isilinganiso lula ukuze ujoyine nje ngeke bakwazi ukucubungula ngaphandle imishini ngendlela efanele, futhi isikhathi eside, ingene ezimbi. Uma ulahlekelwe ukhiye nephasiwedi wesikhwama, ulibuyise akusebenzi. Ngaphezu kwalokho, asikho isiqinisekiso yokuntuleka kobufakazi ekusabeleni okungekuhle iziphathimandla zikahulumeni phezu imali eyengeziwe izakhamuzi zakhona "out of lutho".
Ngo cryptocurrency kunenkinga isimo esingokomthetho lingaqinisekile. Kwamanye amazwe base bevinjelwe, abanye nje kungukuthi Kunconywa ukuba isetshenziswe. Zingasetshenziswa phezu Ukuhwebelana isitokwe, elibonisa kuphela ethandwa kakhulu futhi kwafunwa lwemali yokuthenga futhi badayise, exchange. Ngemva umsebenzisi Iyakwazi ukuthi ungawukhipha kanjani umucwana cryptocurrency, waba nesithakazelo izindlela ka Ukuqaphela yayo. Ngaphezu abathengisayo ukwabelana, amanye amasayithi ukunikela izimpahla namasevisi bitcoins. Lena akuyona ukhetho best, unikezwa ngokushesha kangakanani uphambana. Kodwa ngosizo la masevisi, ungenza ukuthenga izimoto, imishini kanye ne-software, ukwenza iminikelo ukukhokhela air travel.
Yini enquma ngesilinganiso lwemali
Lutho kodwa ukuze kwaneliswe isidingo, akusho alawule intengo imali electronic. At ekuqaleni ukusebenza kwawo ngo-2009, Bitcoins kuphela anqwabelene kanye nezindleko ezincane noma engenazo nhlobo. Kuze mayelana 2013, baqhubeka esimweni elintantayo, futhi inkambo yabo ikhula kancane kakhulu. Cishe akekho owayekholelwa kwezinkokhelo electronic. Lokhu ehlobo umiselwe amanani kakhulu lwemali - mayelana $ 3 ayizinkulungwane.
Kwathatha iminyaka eminingi, ngakho-ke, sesinyukele ku-obungaka. Nakuba cryptocurrency futhi zigoqiwe ku dollar ayinkulungwane, kodwa asikwazi uyavuma ukuthi intengo enjalo futhi ezingaphezu kuka-ezikhangayo. isisetshenziswa kwezezimali izingqinamba ezenza kube ethandwa, ngoba asikho isizathu sokukholelwa ukuthi ozosigingqela isikhundla sayo esidlule. Ukukhetha okuyinto cryptocurrency am Main, kudingeka isikhathi esithile ukuqapha amanani emasayithini okuhlobene.
Esiseduze esizayo futhi amathemba
Abanye abahlaziyi zezimali kufanisa izifiso semali electronic ukuthi igolide. Akumangalisi ukuthi abanikazi abaningi ekukhuliseni ukuzinza. Izibikezelo Cryptocurrency wukuthi bayoqhubeka lukhule ngokuhamba kwesikhathi, ngakho-ke, kunengqondo izimali zakho kuyo. Yiqiniso, akudingeki ukuba ukugembula ngokuhamba kwesikhathi, ngoba akekho kwemali ekhona ngeke sikwazi isekelo okuthembekile, eyaziwa ukuthi baziphathe kanjani futhi izimakethe lokushintshisana ngemva kweminyaka eminingi.
Cryptocurrency - a khulula, ezizimele, engalawuleki yokukhokhelana, futhi sibonga lezi zimfanelo, kuba yimpumelelo. Ukulondeka nokwanda esitebeleni kubangele ithemba, kuyilapho abanye - embonweni wokuthi i bubble kwezomnotho ukuthi uyophahluka ekugcineni. Futhi-ke, ku-amanani kanye cryptocurrency umhlahlo kuthinta abezindaba kanye yokusabela yomphakathi.
Izinsiza kusebenza for nomholo
udinga ukuxazulula umsebenzi oyinhloko ngaphambi kokuqala inqubo izimayini - eyolanda impahla edingekayo. ikhadi levidiyo, noma iqoqo (ipulazi) - lawa amadivayisi bazocula zonke izibalo kanye nokungenisa imali. Bambalwa ukwazi ukuthi ukwenza cryptocurrency, ngoba lokubaluleke kakhulu kutsi uhlole emakethe imishini. Ngaphambi Thenga ihluzo amakhadi asuselwa umthamo wabo, ukubala malini siyokhula izindleko zikagesi. Ngokuphelele ezifaneleke kudivayisi NVIDIA.
Akufanele skimp on izinga processor, nakuba yayineminyaka engu-akukuningi yini okuhilelekile emsebenzini. Kuyadingeka ukuba banakekele komoya okuhle, ngoba imishini ezimayini isipiliyoni imithwalo esindayo. Ngu ekuthuthukiseni ikhadi ihluzo olungakhiqiza komsindo, ngakho-ke kungcono kakhulu uma kungenzeka ukusungula ipulazi egumbini elingaphansi noma egumbini enezindonga obukhulu.
Yini ama-akhawunti ukwehluleka
Bambalwa ukwazi ukuthi ukwenza cryptocurrency, kumelwe futhi bacabangele zonke izinto eziyinkimbinkimbi yenqubo. Abaningi ababezokwakha abavukuzi ukuthenga epulazini lonke emsebenzini, kodwa uphonse ithawula, singenalo noluncane ulwazi lokuthi indlela isebenze kahle nabo. Ukuze uqale, anikezwa hashi ezithile, okuyinto izobalwa. Njengoba yayo eziningi abafuna futhi behileleke nakwezamabhizinisi inqubo kanye labo babe yamandla aphezulu imishini kanye nokusebenza, uhlelo kushintsha yinkimbinkimbi indawo hashi.
Njengoba inani amaqanda ekuqaleni nokuba yinkimbinkimbi lenyuka yenqubo yezamakhompyutha. Futhi ukwehluleka elihlobene ne imishini ezingafanele. Amalungu ukuthi zilungiswa endleleni ukuze uthole cryptocurrency nandlela ngaphandle nezinamathiselo ngokushesha kangaka, uyabhuntsha. Phela, noma yiphi impahla ezandleni kwesokudla uzokhokha ezingeqi kwezingu unyaka owodwa.
Kanjani ukuthenga noma ukuthengisa
Trade cryptocurrency okwamanje ibhizinisi inzuzo kakhulu. It has a izindleko ephakeme nephephile. Ukuthumela zemali yabo umthengi, kumele ugcwalise isicelo, okuzoba ukuthengiselana lapho lwemali wazithola ngesikhathi umsebenzisi, inani bitcoins nekheli lapho ufuna ukuthumela kubo. Isicelo uthola ukhiye isignesha ngabanye. Lo msebenzi kulandelwe block kwemayini, futhi kuthathwa ngokuthi akhawunti agcwalisiwe. Ukuze eyathola ucezu lwemali umthengi idlulisela imali nalolu shintsho ngakulahla nganoma iyiphi indlela.
Izifundo ingabonwa kusukela kumasevisi ahlukene kwiwebhusayithi ekhethekile. Ukuze uthole inzuzo ukuhweba cryptocurrency kuphela kudingeka ukhethe indawo ne izinga eliphakeme. On ezinye zazo kungaba ngokushesha benana for imali yangempela noma idluliselwe i esikhwameni elekthronikhi. I eziyinkimbinkimbi lwemali limbiwa, le ezibizayo kuyoba phezu exchange isitokwe.
AdvCash yokukhokhelana: ukubuyekezwa. ukudluliselwa osheshayo kumephu Advanced Cash
Umphakathi wamazwe omhlaba "Elevrus": isihambi real ukubuyekezwa, Amaholo noma ukukhohlisa
Ukuthi ukuze "AliEkspress"? Yikuphi kuyazuzisa oda "AliEkspress"?
Salary, amathiphu copywriters imfundamakhwela
I "Voice of the People" (i-poll): ukubuyekezwa, izici amaqiniso athakazelisayo
Wedding amasokisi - the okhanga umakoti-accessory
Nokufushane nge okhalweni okusezingeni eliphezulu kubo bonke zonyaka
Ikhambi for umzimba wakho uxabana ne ragweed - ingabe zikhona?
Marmalade "ikilasi Ezingeziwe" kanye jam kusuka amabhilikosi multivarka
Alphonse Bertillon futhi ngegalelo lakhe ukuthuthukiswa kwezobugebengu
3 amanani main futhi bayasilela amafomu isenzo, setha imishwana bese usebenzisa izibonelo
Kotva Ihhotela 4 * (Bulgaria / Sunny Beach)
Bronchial somoya: izimbangela futhi ukwelashwa